Thwebula VirCities 3.1 – Vessoft
VirCities – isu ezomnotho nezombusazwe ne yezinhlobo Simulator ukuphila kule muzi. Injongo eyinhloko ye VirCities kuwumshikashika amandla ngokumelene nabanye abadlali noma Ukubambisana eduze nabo ukuze kuzuzwe iminqopho yakho siqu. Umdlali wanikela eziningi ukukhula career ukukhetha, kusukela isisebenzi ezejwayelekile futhi ilungu eliphakeme kakhulu emkhakheni yomphakathi. In the VirCities kukhona uhlelo elula yezigaba ngalo umdlali uthola lwemali umdlalo kanye imiklomelo ezahlukene. VirCities unikeza Carte Blanche ukwakha izinhlangano zezimali, zohlobo inkohlakalo, ukushicilela amaphephandaba zakho siqu noma bahlasele abanye imizi virtual.
amathuba amaningi sokukhula career
uhlelo Kalula yezigaba
Ukudalula ithalente kwimikhakha ehlukene
Inkositini lamakhono in emzabalazweni
ngokuxhomeke Full of action
Amazwana on VirCities:
VirCities Ahlobene software:
English, Français, Español, 中文... Duolingo 3.34
English, Français, Español, Português... imo 9.8.000000003781